ECN Trading Forex | Inzuzo evela kwi-ECN / STP UkuThengiswa kweeNkqantosi kunye neFXCC
Ikhaya / malunga / Malunga neFXCC / Umzekelo wethu woShishino
Njengomthengisi we-ECX forex FXCC Akukho Dek Dealing. Umzekelo wethu wezoshishino usekelwe kwi-Straight Through Processing (STP) kwinethwekhi edibeneyo yekhompyutha, sibhekisela kulo njengoluhlobo lwe-ECN / STP yeFX. Umzekelo we-ECN / STP wokurhweba ngummandla apho yonke imiyalelo yabathengi bethu ithunyelwa kumaziko ahlukeneyo asemgangathweni kunye namaziko afanelekileyo, ukuze afanelane. Leli gumbi elinamalungu amaziko ahloniphekileyo lenza i-pool yethu yabanini-mali. Oku kuhambelana ngqo, ngokuchanekileyo ngokucwangcisa, kuphelisa amandla enoba nayiphina intengo okanye ukusabalalisa ukusetyenziswa, ngelixa kuqinisekiswa ukuba akukho nto iphikisanayo phakathi kweFXCC njengomthengisi kunye nabaxhasi bethu.
I-FXCC ikholelwa ukuba kubaboneleli abaninzi beenkonzo zokuthengisa iimpahla zenye yeenkonzo eziphambili esinokuzinikezela abathengi bethu kwimakethe ye-forex. Ngenxa yoko sakha ubuhlobo obuqinileyo kunye nobuninzi bezona zininzi: amaziko aqinisekisiwe, ahlonishwayo awamiselwayo, ukuqinisekisa ukuba bonke abathengi bethu bazuza kwiyona nto ukhuphiswano lokusasazeka I-24-5 ikhona, nangona ngexesha leemarike ezinokuzenzekelayo kwaye xa kupapashwa idatha ebalulekileyo kunye neendaba.
I-Aggregator yentengo yeFXCC ihlala ihlaziya ngokuzenzekelayo yonke iBhidi / Cela (ukuthenga nokuthengisa) amanani angena yethu ECN kwaye ihlala ibonisa ukuhlanganiswa kwexabiso elihle kunikezelo oluvela kuzo zonke iinkonzo zethu zokuthengisa. Oku kuqinisekisa ukuba abathengi bethu bazuza kumdlalo omhle we-Bid / Buza amaxabiso atholakalayo inkqubo yokurhweba phambili. Le ndlela yokubaluleka idala indawo yokuqeqeshelwa abahwebi naliphi na izinga labo lamava kwaye linikezela ngokubanzi ukuthengiswa kweenzuzo.
Isishwankathelo somzekelo wokuthengisa weFXCC.
I-FXCC inikezela abathengi bayo ngokufikelela ngokuthe ngqo kumzekelo wamanzi we-ECN, apho bonke abathengi bafumana ukufikelela okufanayo, kwiimarike ezifanayo zamanzi, apho ukuhweba kwenziwa khona ngokukhawuleza, ngaphandle kokulibaziseka, okanye ukucaphulwa kwakhona.
Ngokungafani nokuqhuba abadayisi bamaDiski, iFXCC ayithathi kwelinye icala lwabaxhasi bamakhasimende. Asinakuthengiselana nomthengi: iilaydi, ukuyeka okanye umda kunye nabo bonke abathengi abaxhasi baqhutyelwa emuva ngokuya ngqo kunye namaqela aphikisanayo kwi-pool yethu yabanikezeli bamashishini.
Iingxowa ngokusebenzisa umzekelo wethu we-ECN / STP uhlala ungabonakali, ababoneleli bethu bee-liquidity babone kuphela imiyalelo evela kwi-FXCC.
Ithuba lokuyeka ukulahleka ukuzingela, okanye ukusasazeka kwandisa.
NjengeDiski engeyiyo yokuSebenza phambi komthengisi, akukho nto ingqubanayo kunye nabathengi bethu. Akukho mfuneko yokuba sihlale sisihlasele, ngoko akukho nisilingo sokuba sithengise abaxhasi bethu.
Ixabiso lokungafihli kunye nokuncintisana kwe-forex kusasazeka.
Ukubonelela iiplani zokuthengisa eziphezulu kakhulu ukuya kutsho.
Apha apha kwi-FXCC sikholelwa ukuba abathengi bethu kufuneka babe nazo zonke izixhobo zokuthengisa zangaphambili abahwebi abaphumelelayo kufuneka bachithe. Ngokomzekelo, sinika abaxhasi bethu be-forex ithuba lokufikelela I-MetaTrader 4 software forex.
Ibhuloho yethu ye-ECN ivumela ukuba sinikezele abathengi, abaqhelana ne-MetaTrader, ukhetho lokuqhubeka ukusebenzisa iphambili yokuthengisa kwiimeko ze-ECN / STP.